Cunaqabateyn ka dhan ah South Sudan - BBC News Somali
Cunaqabateyn ka dhan ah South Sudan
Image caption Qaxootiga dalka South Sudan
Madaxweynaha haatan ee gollaha amaanka ee Qaramada Midoobay, ahna safiirka dalka Australia Gary Quinlan, ayaa sheegay xubnaha gollaha amaanka ee QM in ay taageerayaan in lagu soo rogo cunaqabateyn shakhsiyaad gaar ah lagu bartilmaameedsanayo iyo cunaqabateyn dhanka hubka ah oo South Sudan lagu soo rogoyo.
Majiro wax jadwal ah oo loo dajiyey dhaqangalka arrintan welina lama soo bandhigin goorta la fulinayo,waloow saraakiil Mareykan ah ay u sheegeen wakaalada wararka ee Reuters in ergada gollahaasi loo qeybin doono qaraar qabya ah.
Gollaha ayaa filayey in dadaal ay sameeyaan masuuliyiinta gobalka lagu xalin karay colaada wadankaasi, balse uu dagaalka ka sii socday gobolada waqooyi ee saliida qaniga ku ah ee dalkaasi.
10-bilood oo uu hardan siyaasadeed u dhaxeeyey madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkiisii hore ayaa waxa ka dhashay in kumanaan qof ay dhintaan sidoo kalana ay ku barakacaann ku dhawaad 2Million oo qof.
Heshiis nabadeed la saxiixay bishii May oo lagu dhisi lahaa dowllad mideysan ayaa fashilmay.